Warbixin ku saabsan munaasabadda xiritaanka shirka wadatashiga qaran
Waxaa goor dhow xarunta ciidamada cirka ee Afisyooni lagu wadaa in ay ka billaabato xafladda gunaanadka shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka, waxaana lagu wadaa in uu ka soo baxo warmurtiyeed ku saabsan heshiis ay si wadajir ah u saxiixeen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo ku dhow shirkan ayaa sheegaya in munaasabadda xiritaanka shirkan ay ka soo qeybgali doonaan dhammaan saamileyda siyaasadda marka laga reebo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo aan ku qancin guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi.
Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cabdulle ayaa ku soo warramaya in xafladdan ay sidoo kale ka soo qeybgalaan dhammaan danjireyaasha dalalka caalamka ee jooga Soomaaliya, kuwaas oo uu hoggaaminayo Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay James Swan.
Gaba-gabada xafladan ayaa lagu wadaa in madaxdu ay soo saari doonaan bayaan ku saabsan heshiiskii ay mabda' ahaan isku afgarteen, kaas oo ku saleysan hirglinta heshiiskii doorashada ee 17-kii September.
Qodobka ugu adag ee heshiiskan ayaa lagu sheeegay inuu ahaa kan guddiga doorashada ee gobollada Somaliland, maadaama aysan markii hore jirin cid ku mataleysay wadahadallada, hase yeeshee warar ku dhow xaafiiska Ra'isul Wasaaraha ayaa VOA u xaqiijiyay in Ra'isul Wasaare Rooble uu ballan qaaday in uu dib u eegis ku sameyn doono arrintan.
Shirkan oo uu garwadeen ka ahaa Ra'isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa ka soo qeybgalay madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Jubaland, Koofur Galbeed, Puntland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo, Ra'isul Wasaare Rooble, guddoomiyaha golaha shacabka, dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa inay hadallo ka jeediyaan xafladan gunaanadka ah.
Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan midowga musharraxiinta ayaa iyaguna ku jira liiska hadal-jeedinta.
Wixii warar ah ee ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan.